Ezahlukeneyo kwi-iPhone | Iindaba ze-IPhone (Iphepha 5)
Le yintengiso yeKhrisimesi ka-Apple "Yabelana ngezipho zakho", okanye "Yabelana ngetalente yakho"
Le ntengiso yeKrisimesi ka-Apple "Yabelana ngezipho zakho", okanye "Yabelana ngezipho zakho"
Le yeyona midlalo mihle yaseSpain kunye nokusetyenziswa okunikezelwe yiTheAwards
Ezi zezona zicelo zibalaseleyo kunye nemidlalo eyilwe yiSpanish kwi2018 kwaye inikezelwe kwiTheAwards.
Izinto ezifanelekileyo ezithengiswayo ngoLwesihlanu omnyama
Iimpawu ezikumgangatho ophezulu ezinje ngeMophie, Mujjo, InvisibleShield okanye iLaMetric zisizisela izaphulelo xa sithenga ngewebhusayithi yazo
I-Tumblr, njengeTelegram, ihambile kwiVenkile yeApple ukubonisa amanyala abantwana
Isicelo sokubhloga iTumblr sisuswe kwiVenkile yeApple ngolwesiHlanu odlulileyo kuba ibibonelela ngokufikelela kwimifanekiso engamanyala yabantwana eye yagqitha kwiifilitha zenkampani.
Eyona emoji idumileyo kwi-iOS 12.1 yimpandla kunye negroggy
Ngokukhutshwa kwe-iOS 12.1, iApple yazisa ii-emojis ezintsha, ezinye zazo ziye zasetyenziswa kakhulu
Iindaba zohlaziyo lwe-PUGB olulandelayo olufika namhlanje kwiVenkile ye App
Namhlanje kusungulwa uhlaziyo olutsha lwe-PUBG Mobile, uhlaziyo olusinika iBeryl M762 kunye nomphezulu oshukumayo njengeendaba eziphambili.
Iintetho zeKoogeek zeKhayaKit kunye neMpilo
Izibonelelo ezitsha ezivela kwiKoogeek yeKhayaKit kunye neAmazon Alexa izixhobo ezifanelekileyo, ngee-bulbs ze-smart, imitya ye-LED kunye neeplagi.
I-Steth IO ijika i-iPhone yakho ibe yi-stethoscope yobungcali
I-Steth IO yimeko ejika i-iPhone yakho ibe yi-stethoscope yobuchule ehlalutya izandi zentliziyo kunye nemiphunga.
Iifoto zikaGoogle ziya kusivumela ukuba sihlele isiphumo se-bokeh kwiifoto zethu
Umsebenzi omtsha oza kuvela kwisandla sohlaziyo olulandelayo lweefoto zikaGoogle ziya kusivumela ukuba siguqule ukufiphala kwemifanekiso ukongeza ekuchaseni umbala ongasemva
Indlela yokuthatha umfanekiso weskrini-skrini kwi-Pro Pro
Ngokususwa kweqhosha lasekhaya kwi-iPad Pro 2018, ukuthatha iifoto zesikrini kufuna enye indibaniselwano yezitshixo esizicacisa kweli nqaku.
Fumana iVidiyo yeProc yasimahla, eyona app yokuhlela ividiyo igqibeleleyo
IVidiyo yeProc ikuvumela ukuba wenze ukuhlela ividiyo elula kakhulu kodwa ngezixhobo ezinamandla zokufezekisa iziphumo ezimangalisayo.
I-Tumblr inyamalala kwiVenkile ye App
Isicelo seTumblr besingafumaneki kwiVenkile ye App kwiintsuku ezimbalwa. Ngokwenkampani, kuyasebenza ukuba ambuyise ngokukhawuleza.
I-Apple Watch sele inayo (IMVELISO) iRED Loop strap
Ibhendi entsha yemidlalo ye-PRODUCT (RED) ngoku iyafumaneka kwi-Apple Watch, zombini kwifomathi ye-40mm okanye nge-44mm
Iringi yazisa ngeekhamera zayo zokuqala zangaphakathi nangaphandle
Iringi yazisa ngeekhamera zayo zangaphakathi nezangaphandle zekhamera yokujonga kunye neendlela zonxibelelwano ezinentambo okanye zebhetri
Umnini we-Facebook ubuza abaphathi bakhe ukuba batshintshele kwi-Android
Ngamazwi kaTim Cook, umnini we-Facebook uthathe isigqibo sokuyalela abaphathi bakhe ukuba basebenzise iifowuni ze-Android kuphela.
Sihlalutya isicoci sokucoca i-Roidmi F8 Storm, amandla kunye nokusebenza kakuhle
Sihlalutya isicoci se-Xiaomi Roidmi F8 engenantambo, enye into enophawu lwesiTshayina ngobuchule obukhulu kunye namandla eemodeli eziphezulu
INkoogeek entsha inikezela ngesixhobo esizisebenzelayo nasempilweni
Sinikezela ngeKogegeek entsha yokunikwa kwezinto ezizenzekelayo ekhaya kunye neemveliso zempilo ezinamaxabiso anomdla okwexeshana
I-ECG yeApple Watch inokusetyenziswa eSpain ngokutshintsha ingingqi
Inyaniso yokuba iApple Watch sele inayo yonke into efunekayo ukwenza i-electrocardiogram izakuvumela ukuba siyisebenzise ngaphandle kweMelika.
I-MiniBatt Fly kunye neModyuli, ukutshaja ngokukhawuleza kunye nemodyuli
Sivavanye iziseko ezibini zokutshaja kweMiniBAt ezisinika amathuba ahlukeneyo ahambelana naso nasiphi na isixhobo seQi.
IMoshi Porto 5K, ibhetri kunye netshaja engenazingcingo, zonke ziyenye
Sivavanye ibhanki yamandla yokutshaja ngaphandle kwamacingo eMoshi, umzekelo ukuba uyilo kunye netekhnoloji akufuneki iphikisane.
Imicimbi yaseKoogeek ilungiselela uLwesihlanu omnyama
Sikunika ukhetho lwe-Koogeek kunye nezaphulelo kwiikhowudi ezifakwe kwinqaku
Isicelo seendlela ezimfutshane sihlaziywa kwakhona ukuze sihambelane nePad Pro entsha
Isicelo seendlela ezimfutshane sele senziwe ukusukela oko iApple izakuyizisa kwindawo ephambili kubaphuhlisi abagcinwe okokugqibela ...
I-Fitbit Versa kunye ne-Charge 3, iibhendi zakutshanje zoluhlobo ukukhuphisana neApple Watch
I-Fitbit mnos ibonelela ngezinye iindlela ukubheja kwe-Apple Watch kukuzimela okukhulu kunye namaxabiso afikelelekayo ngaphandle kokuyeka eyona itekhnoloji
IOS 12.1.1 izisa iiFoto eziBukhoma kwakhona kwiifowuni zeTimeTime
I-beta yakutshanje ye-iOS 12.1.1 ibuyise iiFoto eziBukhoma kwiifowuni zexesha lobuso kwaye ifihla nophuculo oluthile.
Ukuphuculwa kobuso be-ID kunye nenye into encinci kunyaka we-2019
U-Kuo ukholelwa ukuba i-Apple izakuphucula kakhulu i-ID yobuso kulo nyaka uzayo.
Imakethi yokuthengisa ngomnxeba yehla nge-6% kwaye i-Samsung iyawa
Ngokubanzi, imakethi yefowuni ephathekayo ewile nge-6% iyonke, kunye ne-Samsung yenye yezona zonakaliswe kakhulu yile ngxaki.
Ezona meko zesikhumba zibalaseleyo kwi-iPhone XR yakho
UMujjo usinika amatyala eklasikhi eklasikhi e-iPhone XR enomgangatho oqhelekileyo, ethatha indawo eshiywe yiApple ingenanto.
I-Apple ibhengeza enye iKota yeRekhodi kodwa abatyali mali abonelanga
I-Apple ibhengeza irekhodi yengeniso kwakhona kodwa iimarike ziphinda zohlwaye isenzo sayo ngokuwa kwintengiso yesitokhwe kunye nokuthandabuza
IKoogeek ibonelela ngesixhobo esizisebenzelayo nasempilweni
Izibonelelo ezitsha ezivela eKoogeek ezibandakanya izixhobo ezinokwabelwana ngeKhayaKit, iAmazon Alexa kunye nezixhobo zokukhathalela impilo yethu.
Sihlalutya i-mophie Powerstation XXL
Ukuba le nto uyikhangelayo ibhetri enkulu ngazo zonke iindlela, ukubuyisela uhambo lwakho kwiplagi, ungathandabuzi, ufuna iMophie Powerstation XXL.
IOS 12.1 ngoku iyafumaneka kubo bonke abasebenzisi
Uhlaziyo lokuqala olukhulu kwi-iOS 12, inombolo 12.1 ngoku iyafumaneka kubo bonke abasebenzisi ngesixhobo esihambelana ne-iOS 12.
IPad Pro ihlaziyiwe: Sala kakuhle kwizakhelo, molo Ubuso be-ID kunye ne-USB-C
Emva kwamarhe amaninzi esibe nawo kwiintsuku zamva nje, iApple ivuselela i-iPad Pro ngaphandle kwesakhelo kunye ne-ID yobuso kunye ne-USB-C. Eyona Pro Pro iphambili.
IMacBook Air ihlaziyiwe ngomboniso onamandla weRetina kwaye icekeceke nangaphezulu kunemodeli yangaphambili
Abafana abavela eCupertino baqala ukwaziswa ngesixhobo ngeMacBook Air entsha: isibonisi esitsha seretina kwilaptop ephathekayo ngakumbi.
Eyona ndawo iphambili yeApple Link yeBelt
Sivavanye ezona mpendulo ziphambili sizibonileyo kwi-strap ye-Apple edumileyo nebizayo onokuyifumana kwishumi sexabiso
Zonke zimiselwe kwiNdlu yeWoward Gilman Opera ye-Keynote yangomso
Abafana abavela eCupertino banayo yonke into ekulungeleyo ukumiliselwa kwe-iPads Pro entsha eKeynote ngoSeptemba 30 eNew York.
Oku ibikukusungulwa kwe-iPhone XR ePuerta del Sol
Andithandabuzi ukuba i-iPhone XR iya kuba yeyona nto ithengisa kakhulu, kodwa ukumiliselwa kwayo akukabikho, kude kube ngoku.
Iintetho zeKoogeek kwizixhobo zononophelo lwempilo
Sikuphathela i-2 Koogeek enikezela ngayo kwiimveliso zokhathalelo lwempilo ezinje nge-thermometer yedijithali kunye nokuthambisa into ngombane.
INkosana yasePersi: Ukuphunyuka, ukuphakama kobuso obukhulu kwiklasikhi
Ngoku kuza iNkosana yasePersi: Ubaleke, umfanekiso ohlaziyiweyo kunye onomdla weklasikhi yeklasikhi.
Sihlalutya umtya weKoogeek Smart Outlet, ohambelana neKhayaKit kunye neeplagi ezintathu ezifanelekileyo onokuzilawula ngelizwi lakho
I-USB-C iya kuthatha indawo yoMbane njengezibuko lokutshaja lePad Pro entsha
Kwindibano apho abavelisi bezinto ezidibeneyo badibana khona, kwaqinisekiswa ukuba i-IP Pro entsha 2018 izakuzisa unxibelelwano lwe-USB-C.
I-Fortnite ihlaziywa ngokudibanisa isithuthi esitsha kunye nokuphucula ulawulo lomdlalo
Umdlalo we-Epic Games osesefashini kwihlabathi liphela, uFortnite usandula ukufumana isithuthi esitsha kuhlaziyo lwamva nje.
I-VideoProc, umhleli wevidiyo ye-4K kunye necompressor (kunye neGoPro)
IVidiyo yeProc sisoftware yokuhlela ividiyo edibanisa amandla kunye nobuhlobo bomsebenzisi, kwaye ungazama mahala.
I-Apple ikhupha iiVidiyo ezimbini eziqaqambisa uQeqesho kunye neZinto ze-SOS zeApple Watch
U-Apple upapashe iividiyo ezimbini ezibhekisa kwi-SOS engxamisekileyo kunye noQeqesho lwe-Apple Watch kunye ne-watchOS.
I-Plantronics BackBeat Fit 3100, i-Wireless eyiyo inyani ize kwezemidlalo
Sihlalutya i-Plantronics BackBeat Fit 3100, ii-headphone zokuqala ezingenantambo ze-brand, ezilungele ezemidlalo kunye netyala lokutshaja.
I-Logitech POP, iqhosha lokulawula iKhayaKit
Sihlalutya i-Logitech POP, iqhosha elibonakalayo elisivumela ukuba silawule ezinye izixhobo zeKhayaKit esizongezileyo endlwini yethu
Ityala leMujjo Leather, ulusu olusemgangathweni kwi-iPhone yakho XS kunye neXS Max
Sivavanye amatyala kaMujjo ngesikhumba se-iPhone XS kunye ne-XS Max, eyenziwe ngesikhumba seprimiyamu kwaye iyafumaneka ngemibala eyahlukeneyo.
Iimephu zikaGoogle zongeza ulawulo lweApple Music, Google Play Music kunye neSpotify
Iimephu zikaGoogle zongeze ulawulo kwimbonakalo yokuhamba kwe-Apple Music, Google Play Music kunye neSpotify njengoko uWaze sele evumile.
Iidilio ezintsha zeKoogeek zeKhaya neMpilo
I-Koogeek iye yodwa yohlobo lwereferensi kwilizwe lobuchwephesha, ngakumbi ...
I-iPhone XS ithengisa kakuhle, kodwa i-iPhone 7 ingcono
Ukugxekwa malunga nokuphuculwa "okumbalwa" okubandakanya i-iPhone XS xa kuthelekiswa ne-iPhone X zi ...
Ikhamera ye-iPhone XS Max iphantse yeyona ilungileyo kwintengiso
Uhlalutyo lwenkampani "ehloniphekileyo" i-DxOMark, iwebhu yabahlalutyi abaphethe amanqaku ...
Imigangatho iya kuyibona eyona midlalo ilungileyo kunye nosetyenziso kwiqela losetyenziso
Ngaba ungumphuhlisi wemidlalo yevidiyo okanye usetyenziso lwe-iOS okanye i-Android? Ngaba ufuna ukubonisa ukuba kutheni iimveliso zesoftware zikhethekile ...
I-Apple Pay Cash inokuza ngokukhawuleza eYurophu
Kukho imiqondiso enokubonisa ukwaziswa ngokusondeleyo kweApple Pay eSpain nakwamanye amazwe aseYurophu anjenge-Itali, iJamani okanye iFrance.
Imozulu ye-Ambi 2, ulawulo olukrelekrele lwemeko yomoya
Sihlalutya ulawulo lwemozulu yomoya Ambi Climate 2, inkqubo esebenzisa Ubukrelekrele bokusebenza ukuze uhlale ukhululekile ekhaya
IGear.Club-uMdyarho oyinyani ngumdlalo omnandi wokubaleka we-iOS
Gear.Club umdlalo omtsha wokubaleka odibanisa ngokugqibeleleyo imizobo, isantya kunye neelayisensi.
Uvavanyo lwesithethi esinye sikaSonos, smart kunye neAirPlay 2
Sihlalutya isandisi-lizwi seSonos One, esona sixabisekileyo sophawu kodwa sinomgangatho "we-TOP" kunye neempawu ezinje nge-AirPlay 2, iMultiRoom kunye neemodyuli.
Imidlalo yensimbi ye-HR, eli ligama le-smartwatch entsha ye-Withings
Inkampani ye-Withings ibuyela emarikeni emva kokubuyela ezandleni zomnye wabaseki bayo kunye ne-Steel HR Sport smartwatch
Ungazilawula njani ngokukhawuleza izaziso zethu kwi-iOS 12
Siza kukubonisa ukuba ungazilawula njani ngokukhawuleza izaziso ze-iOS 12 ngaphandle kokushiya iZiko leSaziso enkosi kwinkqubo yokuCoca kwangoko.
UGoogle ubhatala izigidi ezingama-9.000 kuApple ngokuba yinjini yokukhangela
UGoogle ubhatala kulo nyaka i-9.000 yezigidi zeedola ngokuba yinjini yokukhangela emiselweyo kukhetho lokukhangela lwe-iOS.
Ngaba i-Facebook inokuyenza mandundu? Asisazi ukuba liphulo elinamandla kakhulu le-smear ngamajelo eendaba aphesheya ...
IMacX MediaTrans, enye indlela eya kwi-iTunes onokuthi ngoku uzame simahla
IMacX MediaTrans isinika enye indlela elula nekhawulezayo yokuya kwi-iTunes, enemisebenzi efana nokwenza iithowuni zokukhala okanye ukuhambisa iifayile.
Vele u-Mobile TENC kunye no-Xkin, khusela i-iPhone yakho ngaphandle kokuqwalaselwa
Isikhuseli sekhusi kunye netyala elikhusela i-iPhone yakho ngokungenelela kancinane kuyilo lwayo, kunye nomgangatho nje weSelfowuni
I-YouTube ye-iOS sele inikezela nge-HDR ye-iPhone XS
I-YouTube sele inika abasebenzisi be-iPhone XS kunye ne-iPhone XS Max amandla okonwabela umxholo kwi-HDR.
Ngaba i-iPhone XS ivula ii -apps ngokukhawuleza kuneGalaxy Note 9?
Kule meko siza kubona iziphumo xa kuvulwa usetyenziso phakathi kwe-iPhone XS Max kunye ne-Galaxy Note 9, yeyiphi eya kukhawuleza?
IPhone X igqitha kwii-iPhones ezintsha kuvavanyo lobomi bebhetri
Ngokweemvavanyo zokuqala zamandla ebhetri, i-iPhone XS entsha kunye ne-iPhone XS Max zisinika ukuzimela okubi ngakumbi kune-iPhone X yantlandlolo.
I-FIFA 19 Companion iza kwi-iOS, lungiselela iQela lakho eliGqibeleleyo ukuze lisungulwe
Umlingani weFIFA 19 ngoku uyafumaneka kwiVenkile yeApp ye-iOS ukuze ukwazi ukulungiselela amaqela eQela lakho eliGqibeleleyo, ungashiyi nto ngethuba.
I-Plantronics ivuselela uluhlu lwee-headsets zazo zonke iintlobo zabasebenzisi
I-Plantronics yenye yeempawu zethu esizithandayo ngokunikezela ngeemveliso ezisemgangathweni ngamaxabiso afanelekileyo, ke zihlala ziziindaba ezimnandi zokuba uvuselele iPlitronics yakho ivuselele uluhlu lwazo lwee-headphone ezingenazingcingo kunye neemveliso ezintsha ngamaxabiso anomdla kunye nesiqinisekiso somgangatho ophezulu wesandi
Fumana ezi khamera zokujonga kunye nezaphulelo ezibalulekileyo
U-Yo usinika iikhamera ezimbini zokujonga, enye yangaphakathi kunye neyangaphandle, ngesibonelelo esikhethekileyo usebenzisa iikhuphoni esizibonisayo.
Fumana iswitshi yeKoogeek yeKhayaKit ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-33
IKoogeek ithengisa utshintsho lwayo oluhambelana neKhayaKit ngezaphulelo ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-33 zisebenzisa ezi khowudi kwiAmazon.
Uthotho lweApple lokubukela i-4 LTE: ukungabikho kwebhokisi engabonakaliyo kunye nokuQala kokuQala
Sijonge olu luhlu lutsha lwe-Apple Watch 4, ngakumbi imodeli yentsimbi yeJet emnyama nge44mm LTE, uguquko olumangalisayo lweApple Watch.
I-iPhone XS Max: i-Unboxing kunye neempembelelo zokuqala
Sijonga i-iPhone XS Max, i-smartphone enesona sikrini sikhulu esakhe sakhutshwa ngu-Apple. I-iPhone enkulu enezinto ezintle.
Impilo njenge-axis enqamlezileyo yetekhnoloji yeApple
I-Apple iyacaca ukuba impilo kufuneka ibe yintsika ephambili kuphuhliso lweemveliso zayo, ukuze kuphuculwe ubomi babasebenzisi.
I-beta ye-iOS 12.1 sele isesidlangalaleni, thatha ithuba lokuyifaka
Ewe sine-iOS 12.1 kwisigaba sika-beta esidlangalaleni kwaye ngoku unokuyikhuphela ngezinto ezintsha ezibandakanya oku, njengeFaceTimes.
Amanye amaBhaso oMsebenzi ahambile nge-iOS 12, kodwa baya kubuya
UApple uyazi kakuhle ukuba amanye amabhaso oMsebenzi anyamalele, kodwa uthembisa ukuba baya kubuya kuhlaziyo olulandelayo.
Siza kukubonisa kwividiyo zonke iindaba ze-iOS 12
Ayifani ukuyibona njengoko iza kuxelwa, yiyo loo nto senze ividiyo apho sichaza khona ezona ndaba zibalulekileyo ziboniswe kwi-iOS 12.
I-Twitter iya kuphinda ivumele ixesha elingqongqo lokulandelelana
iakhawunti yaseburhulumenteni yokuxhasa i-Twitter ibhengeze iindaba eziza kufikelela kumda wexesha lethu kwaye oko kuyakuvumela ulawulo olungcono kwinto esiyibonayo.
Ukuvavanya iPod yasekhaya ngeSpanish
Ukuphehlelelwa kwePodPod yasekhaya kwi-iOS 12 ekugqibeleni kuzise ulwimi lwaseSpain kwisithethi esi-smart sika-Apple, siye sayivavanya kwaye sayifundisa kwividiyo
Uhlalutyo lwenqaba yamandla eSistem 7, amandla kunye nesitayile ngexabiso elifanelekileyo
I-Energy Sistem isungula inkqubo yayo ye-Wireless 7 True Wireless, ene-100W yamandla, igalelo elininzi lokulalelwayo kunye noyilo olugqibeleleyo nolugqityiweyo
Ngoku iyafumaneka kwividiyo yenqaku eliphambili lokugqibela kwiwebhusayithi yeApple
Ukuba awuzange ube nethuba lokonwabela ividiyo yomboniso ophambili we-iPhone entsha kunye neApple Watch, ungakwenza oko ngewebhusayithi yeApple.
Bukela isishwankathelo semizuzu eli-12 senqaku eliphambili lika-Apple
Uluhlu lwe-Apple Watch 4: I-Apple Watch ukuya kwinqanaba elilandelayo
U-Apple usandula ukwazisa imodeli entsha ye-Apple Watch. Uthotho lwe-Apple Watch 4 kwaye luza neempawu zokuyila ngokutsha kunye nomtsalane.
UKingston Bolt Duo, ulibale malunga namandla emithambo kwi-iPhone yakho
I-Kingston DataTraveler Bolt Duo yimemori yangaphandle ye-iPhone yakho okanye i-iPad eya kuthi yandise amandla ayo okuthintela ukucima iifoto okanye iividiyo
Iqinisekisiwe: i-iPhone XS, i-XS Max kunye ne-XR, ukuya kuthi ga kwi-512GB umthamo
Ukuvuza okutsha kuqinisekisa amagama e-iPhone entsha kunye nobuchule obahlukeneyo apho baya kufumaneka khona
Uphengululo lukaEva Aqua, uMlawuli wenkcenkceshelo ohambelana neKhaya
Sihlalutya ulawulo lokunkcenkceshela lwe-Eva Aqua oluzenzekelayo oluhambelana neKhayaKit, inezinto ezinomdla kodwa zininzi izithintelo
Landela umboniso we-iPhone entsha bukhoma kwi-iPhone News
Sikuxelela ukuba ungayilandela njani inkcazo ye-iPhone entsha kwaye uthathe inxaxheba kuluvo lwakho kunye neqela leActualidad iPhone
Thatha ithuba lezi zaphulelo kwi-Koogeek LED iibhalbhu, iiplagi kunye nemicu
Izibonelelo ezinomdla zeKoogeek LED iibhalbhu, iiplagi ezifanelekileyo kunye nomtya we-LED kwezi khowudi zilandelayo zesaphulelo
Ngoku kunokwenzeka ukugcina ii-iPhone Xs kunye ne-iPhone 9, eRomania
Ngoku ungagcina ii-iPhone Xs, i-iPhone Xs Max kunye ne-iPhone 9 kwivenkile yaseRomania kwiwebhusayithi yabo nakwimibala eyahlukeneyo.
I-iPhone 9 ibonakala kwifoto enemibala emitsha
Imifanekiso eliqela isibonisa imibala apho i-iPhone 9 entsha inesikrini se-LCD esine-6,1-intshi kunye nexabiso eliphantsi elinokufika.
Abantu bacela ibhetri engakumbi kwi-iPhone entsha
Makhe sijonge umbono wabasebenzisi malunga nokukhethwa kwinqanaba leendaba.
Skype ushicilelo umnxeba eze Mac and iOS
Abafana abakwiSkype balindele ukumiliselwa kweXesha lokuJongana ngokwazisa ukurekhodwa kwevidiyo ye-iOS kunye neMac.
I-Koogeek Door kunye noPhononongo lweSensow Window, efanelekileyo kwiKhayaKit
Sivavanye umnyango weKoogeek kunye ne-Window sensor, isixhobo esincinci esilungele ukudibanisa nezinye izixhobo kwiqonga leKhayaKit.
IOS 11 ithi ndlelantle kunye nokwamkelwa okungenani ngama-85%
Kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kokumiselwa ngokusesikweni kwe-iOS 12 ecwangciselwe iveki ezayo, ukwamkelwa kwe-iOS 11 sele i-85% ubuncinci.
INetflix kunye neAmazon kuya kufuneka benze umxholo ongaphezulu waseYurophu
Uninzi lwabasebenzisi, kwelinye icala, bakhetha kuphela umxholo welizwe, umxholo esinokuwufumana kwiindlela ezahlukeneyo zesizwe, i-European Union ihlasela iinkampani zaseMelika kwakhona kwaye iya kuzinyanzela ukuba zibonelele nge-30% yekhathalogu yemveliso yaseYurophu.
Eyona Amazon ibalaseleyo yokuBuyela eSikolweni
Sikhetha eyona teknoloji ibalaseleyo iAmazon isinika yona kwiphulo layo le- 2018 "Buyela eSikolweni", ngezaphulelo ukuya kuthi ga kwi-40%.
Sele siyibona i-iPhone XS kwividiyo
Umboniso wevidiyo usibonisa ukubonakala kwe-iPhone XS entsha eza kuboniswa yiApple kwiveki, enombala wayo omtsha wegolide
I-Xtorm Wave, ungaze uphele ibhetri kwizixhobo zakho
Sivavanye ibhetri yangaphandle yeXtorm Wave, enye indlela ebalaseleyo kwabo bafuna ibhetri enkulu yokutshaja ngaphandle kwamacingo
Yiyo yonke into esiyaziyo malunga ne-iPhone XS
Siqokelela yonke idatha eyaziwayo malunga ne-iPhone XS entsha eza kuziswa ngu-Apple ngoSeptemba 12, amarhe kunye nokuvuza
Khuphela iphepha lodonga le-iPhone XS entsha
Kwiiyure ezimbalwa sazi kakuhle ukuba iza kuba njani i-iPhone entsha kulo nyaka kwaye kubonakala kuyinto engakholelekiyo ukuba ...
Shaja i-iPhone yakho ngesitayile ngeXtorm Balance kunye noMlingo
Sivavanye i-Xtorm Balance kunye neMagnethi yokutshaja iziseko, ezenziwe ngealuminium kunye nezinto ezilukiweyo kunye noyilo olufanelekileyo lokubeka naphina endlwini.
Le yi-AirSnap, imeko yesikhumba yee-AirPods ezenziwe ngabantu abalishumi elinesibini eMzantsi [Uhlalutyo]
Kwiintsuku ezidlulileyo besithetha ngokuqaliswa okutsha ngabalishumi elinambini baseMzantsi, omnye wabavelisi abaziwayo bezinto ...
Funda zakudala ezivela kwiThala leencwadi laseNew York kwiiNdaba ze-Instagram
Abafana abavela kwiThala leeNcwadi loLuntu laseNew York bayothuka ngokuzisa ezakudala ezinje ngoAlice kwiWonderland ukuya kumabali e-Instagram.
I-SPC-Makeblock Neuron Inventor Kit, indlela emnandi yokuqalisa kwiirobhothi
Sikubonisa ikiti efanelekileyo ukuba abantwana bonwabe ngelixa beqala ukuqonda iikhonsepthi ezisisiseko zerobhothi kunye nenkqubo.
Imiceli mngeni emitsha yokuSebenza kweMinyaka engama-50 yeRedwood National Park
Isikhumbuzo seminyaka engama-50 sePaki yeSizwe iRedwood eMelika isondela kwaye inkampani yaseCupertino iyibhiyozela ngemiceli mngeni emitsha.
UMicrosoft uthi i-Sway app iyakuyeka ukusebenza phambi kokuphela konyaka
Isicelo sikaMicrosoft incubator, ukongeza kwinkampani uqobo, isinika uluhlu olubanzi lwezicelo ezikhoyo kwiVenkile yeApple, Inkampani esekwe eRedmond iqinisekisile ukuba iyakuyeka ukunika iSway isicelo ngeVenkile ye App, kodwa yonke imixholo eyenziweyo iya kuthi qhubeka nokubakho.
I-Raspberry eblue, umgangatho ohambelana neMac, i-iPhone kunye ne-iPad
Sihlalutya imakrofoni yeBlue Raspberry, isixhobo esiphathwayo onokuwusebenzisa kunye nekhompyuter yakho, i-iPhone yakho kunye ne-iPad yakho ngaphandle kokuphulukana nomgangatho
IKoogeek Smart Light Strip, ukukhanya kunye nokuhonjiswa kweKhayaKit
Sihlalutye umtya we-Koogeek Smart Light strip, isibane sokuhombisa esihambisanayo esihambelana neKhayaKit kwaye sifaka kwimizuzu nje embalwa.
Isicwangciso somdlalo weROMA: Imfazwe iyonke iza kufika kwi-iPhone ngo-Agasti 23
IROMA: Imfazwe iyonke, umdlalo wevidiyo olungiselelwe i-iPad kwithuba elidlulileyo, wabhengeza ukuba ekugqibeleni siza kuba nohlobo lwe-iPhone ngo-Agasti 23.
Ngokukhawuleza uSiri angaliqonda ilizwi lakho ukuba enze imisebenzi eyahlukeneyo
Ilungelo elilodwa lomenzi linokubonisa ukuba uSiri wakwazi ukwahlula phakathi kwamazwi ahlukeneyo, into enokubaluleka kwiPodPod yasekhaya.
Nokuba i-Galaxy Watch okanye i-Galaxy Home ayikhuphisani nabadlali bayo be-Apple
Yonke into ibonisa ukuba i-Galaxy Watch okanye i-Galaxy Home ayizukuphikisana neemveliso ezifanayo zenkampani yeCupertino.
Iapile iba yiTrillion yeNkampani yeDola
I-Apple iphumelele ukwaphula isithintelo seedola kwiimali zentengiso, into engekhoyo enye inkampani eye yaphumelela ukuza kuthi ga ngoku.
Kuqala ibhokisi ye-AirPods kwaye ngoku i-iPad ngaphandle kwesakhelo, ngaphandle kweqhosha kwaye ngaphandle kwenotshi. Ikhowudi ye-IOS 12 iyaqhubeka nokuthetha
Kwaye emva kokuba iinguqulelo ze-beta ezisungulwe yi-Apple ikhowudi yemithombo yezi ityhila iimfihlelo ezibalulekileyo ...
Sihlalutya iikhamera zokhuseleko ze-Yi zangaphakathi nangaphandle
Sihlalutya iikhamera zokhuseleko ze-Yi ngaphakathi nangaphandle, onokuthi wenze inkqubo yokujonga ividiyo ekhayeni lakho.
Gqitha kwi-Smart Reader, umfundi ofanelekileyo wekhadi kwiiholide zakho
Siphonononge iTranscend Smart Reader SD kunye nomfundi wekhadi le-MicroSD, ehambelana ne-iPhone kunye ne-iPad yokuhambisa umxholo kuwo onke amacala.
UApple angabonisa ii-iPhones ezintsha ngoSeptemba 12
I-CNET inesibindi sokubheja xa sinokubona ii-iPhones ezintsha kunye nomhla wayo ocetywayo ngoLwesithathu, nge-12 kaSeptemba.
Ngoku iAmazon Echo ifumana nasiphi na isiqulatho sesandi njenge-AirPlay
Inoveli ngoku kukuba singadlala phantse nasiphi na isiqulatho kwiAmazon Echo yethu ngokukhawuleza ngokungathi yiAirPlay enkosi kwiAlex Cast.
Konke malunga nePasipoti yeTelegram
Umnxeba namhlanje ukhuphe iinguqulelo 4.9 zee-iOS kunye nezicelo ze-Android enento entsha, iPasipoti entsha yeTelegram.
I-Apple sele isebenza isombulula ingxaki yokuba semngciphekweni kweBluetooth
Kunyaka ophelileyo, kwabhengezwa ukuba iinethiwekhi ze-Wi-Fi ezisebenzisa umthetho we-WPA2 zinobungozi obuvumela abahlobo babanye ukuba bafikelele. isixhobo.
I-iPhone iyaqhubeka nokunyuka kwintengiso eyeba isabelo kwi-Android
Ukuthengiswa kwe-iphone kuyaqhubeka ngesantya esihle kwaye ukwanda kwesabelo sentengiso e-United States, eSpain nakwamanye amazwe kusetyenziswa i-Android.
Umququzeleli weSiri wamva nje ushiya iApple
Umncedisi ka-Apple uSiri wayengeyiyo indalo yenkampani uqobo, kodwa yafunyanwa kwiminyaka embalwa edlulileyo, kwiqela labaphuhlisi, owokugqibela wabadali abathathu bomncedisi ka-Apple, uSiri, usandula ukushiya inkampani, ubanga ukuba izizathu.
Ibala lokudlala laseFortnite liza kubuya ngomso
I-Fornite ibe yimpumelelo kuwo onke amaqonga efumaneka kuwo namhlanje, onke ngaphandle kwe-Android, iqonga apho ngoJulayi 25, iFortnite Playground iya kuphinda ifumaneke ngeendaba ezintsha ezibalulekileyo.
amachaphaza M, enokwenziwa ibe yeyakho ngokupheleleyo kunye nokunciphisa ingxolo esebenzayo
amachaphaza M zii-headphone ezintsha ezinokuthi zenziwe ngokwezifiso nokusingqongileyo kwaye iphulo labo ngoku liyafumaneka kwi-Indiegogo.
Sebenza ngoku: Isibhedlele, imisebenzi yolonwabo ye-simulator ye-iOS
Ngesixhobo sokunyanga amayeza Sebenza ngoku: Isibhedlele, kuya kufuneka ulawule onke amacandelo ezonyango angenakucingwa kwaye ube ngowona uphambili.
Sivavanye iibhalbhu ezilumkileyo ze-LIFX zeKhayaKit
I-LIFX isinika uluhlu olupheleleyo lwezibane ezihambelana neKhayaKit, kwaye sivavanye ii-bulbs zazo ze-LED kwaye sikubonisa zona kwividiyo
I-Fortnite iyaqhubeka nokuqhushumba amanani kwaye iqokelela ngaphezulu kwesigidi sezigidi zeedola kuthengiso oludibeneyo
Alithandabuzeki elokuba neMidlalo ye-Epic ayilindelanga le mpumelelo ibalaseleyo yomdlalo weFortiteite Royale, kwaye leyo ...
U-Apple uyeke ukusayina i-iOS 11.4 emva kokukhupha i-iOS 11.4.1
Kwiveki ephelileyo, amakhwenkwe kaCupertino akhuphe ingxelo yokugqibela ye-iOS 11.4.1, uguqulelo lokugqibela olufike emva kweebheta ezininzi kwaye lafika Amakhwenkwe aseCupertino ayekile ukusayina ingxelo ye-iOS 11.4 ngaphambi kwayo esinokuyifumana okwangoku kwi-Apple's abancedisi.
Iya isanda into yokufumana abantu abakhohlisayo kwi-PUBG, inkampani iyasikhuthaza ukuba sizixele
Xa sithetha ngemidlalo ehambayo, namhlanje kubonakala ngathi yiFortnite kuphela ekuthethwa ngayo, ngakumbi malunga ...
Iglasi Igophe Elite, iglasi ekhusela iApple Watch yakho
I-Shield engabonakaliyo isinika iglasi yokukhusela i-Apple Warch engabonakaliyo kwaye engachaphazeli ukubonakala okanye ukusetyenziswa kwesikrini.
Sivavanye iDanalock V3, i-smart lock ehambelana neKhayaKit
Sivavanye i-Danalock smart lock, i-HomeKit yokuqala ehambelanayo esinokuyisebenzisa kunye ne-European locks. Sichaza ufakelo kunye nokuphathwa kwayo.
POPSICASE, ityala elinombono owahlukileyo
I-POPSICASE isinika izigqubuthelo zoqobo ezikwenziwe nge-100% yezinto eziphinda zenziwa ezisetyenziselwa unxweme lwethu lweMeditera.
Intloko entsha kaSiri nguJohn Giannandrea, ovela kuGoogle
Utyikityo olutsha lwe-Apple lukaSiri ukuba ayeke ukuba phakathi, nguJohn Giannandrea, utyikityo oluvela kwicandelo le-AI likaGoogle.
Oogqirha banenkxalabo yokuba abasebenzisi becocaine baxhomekeke kwiApple Watch njengomtya
Inani labasebenzisi becocaine liyanda, abathembela ngobomi babo kwiApple Watch ngenxa yesivamvo sokubetha kwentliziyo esisibonisa ukushukunyiswa ngawo onke amaxesha.
I-Apple isungule iphulo «Buyela eSikolweni» komnye unyaka kwaye ezi zizaphulelo
I-Apple isungule ngokusesikweni umkhankaso wayo wokubuyela eSikolweni apho ibonelela ngezaphulelo ezinkulu kwiiMacs nakwii-iPads zabafundi baseyunivesithi.
Ixesha le-5th le-Fortnite ngoku liyafumaneka, zezi ziindaba zayo
Ixesha lesihlanu leFortnite lilapha ukuhlala kwaye liza lilayishwe ziindaba ezintathu ezinomdla eziza kusivumela ukuba sonwabele umdlalo nangakumbi
Inkqubo yokukhuphela ngokuzenzekelayo kwiNetflix iza kuza kungekudala kwi-iOS
INetflix isungule inkqubo yokukhuphela isahluko esizenzekelayo kuhlobo lwayo lwesicelo se-Android, kwaye oku kusebenza kungekudala kuza kuza kwi-iOS.
I-Spark ihlaziywa ukulungisa inguqulelo engu-2.0.7 yokukhutshwa kweempazamo
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo uSpark usungule inguqulelo yayo engu-2.0.7, inguqulelo ethembise umlo olungileyo weendaba zesicelo ...
U-Apple utyholwa ngokwaphula imithetho ye-antitrust eJapan
Ikhomishini yaseJapan yokulwa ukungaqiniseki ityhole iApple ngokwaphula imithetho, nangona kweli ityeli ingekavunywa.
I-LG iba ngumboneleli ophambili wesikrini kwi-Apple Watch
Kunyaka ophelileyo, umvelisi waseKorea u-LG waphumelela umlo ngokuchasene nembangi yakhe ephambili, iSamsung, njengomboneleli ophambili wemiboniso yeApple Watch.
Uphononongo lweSonos Play: 5, isithethi esinoburharha ekhayeni lakho
Sihlolisise i-Sonos Play: 5. isithethi esihle esiza kuthi kungekudala sibe yi-AirPlay 2 ehambelanayo kwaye iya kugcwalisa naliphi na igumbi elinesandi esikhulu
IApple ikhupha ngokusesikweni i-iOS 11.4.1, iwotsOS 4.3.2 kunye ne-tvOS 11.4.1 yabo bonke abasebenzisi
Kwimizuzu embalwa edlulileyo, iApple ikhuphe iinguqulelo zokugqibela ze-iOS 11.4.1, iwotsOS 4.3.2 kunye ne-tvOS 11.4.1 yabo bonke abasebenzisi….
I-iPhone 8 yeyona nto ithengiswa kakhulu, ilandelwa yiGPS S9 + kunye ne-iPhone X
Ngexesha lenyanga kaMeyi, i-smartphone ethengiswa kakhulu emhlabeni yayiyi-iPhone 8, enamanani afanayo okuthengisa njengeGPS S9 +
Uphengululo lwekhamera yesenzo Insta360 Inye, isifundo esipheleleyo ezandleni zakho
Sihlalutya i-Insta360 Ikhamera enye, ikhamera yesenzo ethatha ividiyo ye-4K UHD kwi360º kunye neapp ekhethekileyo ekuvumela ukuba uyihlele kwi-iPhone yakho
I-logo yeApple, ibali elihle kunye nebali eliyinyani
Isizathu samabali amaninzi kunye neentsomi zasezidolophini, imvelaphi yelogo yeApple ayisiyiyo le banayo abaninzi, okanye uninzi lwabantu olungathanda ukuba lube yiyo.
I-Apple Music igqibe iSpotify eMelika
I-Apple Music ibiya kudlula kubabhalisi abazizigidi ezingama-20 eMelika, bephambi kweSpotify kwilizwe laseMntla Melika.
I-Xtorm isinika iintambo kunye neKevlar kunye newaranti yobomi
I-Xtorm isinika iintambo ezenziwe ngeNylon kunye neKevlar ethembela ukuba iya kuhlala ixesha elide kwaye yiyo loo nto iqinisekisiwe
I-iPhone ye-2018 inokuba ne-4GB ye-RAM
Ngeli xesha lasehlotyeni, izinyibilikisi ezintsha eziza kuboniswa yiApple, kwangaphambili, ngoSeptemba, kufanele ukuba sele ikwizigaba zokugqibela zovavanyo. Idatha yeGeekbench ibonakala ibonisa iPhioen entsha ene-4GB ye-RAM kunye nophuculo oluncinci kumandla eprosesa.
INtloko yeBhola yesi-2, umdlalo wokuzonwabisa ngexesha lesiqingatha semidlalo yeNdebe yeHlabathi
Uninzi lwenu sele niyazi intsomi ibhola yeNtloko, umdlalo olula apho ngaphandle kokucinga ...
I-Apple inokumilisela uthotho, umculo kunye nesicwangciso seendaba ngobhaliso olunye
I-Apple inokumilisela ukubhalisela ixesha elinye kwiTV, umculo kunye neenkonzo zeendaba, ngentlawulo enye yenyanga
IMiniBatt isinika itshaja zazo zonke izinto esizithandayo kunye nezihlandlo
Sivavanye uluhlu lwe-MiniBatt yeeshaja ezingenazingcingo ze-iPhone X, i-iPhone 8 kunye ne-8 Plus ngezisombululo zazo zonke iintlobo zamaxesha.
Iakhawunti yabasebenzisi be-Android phakathi kwe-15 kunye ne-20% yentengiso yekota
Ngokophando lwamva nje, ipesenti yabasebenzisi abasuka kwi-Android besiya kwi-iOS iphakathi kwe-15 kunye ne-20%.
NgokukaMark Gurman, iApple icwangcise ukususa izibuko leMbane
Sonke siyacaca ukuba iApple ayizukuhamba gwenxa malunga notshintsho kwi-iPhone yakho, oku kuyenza ...
I-beta yesithathu ye-iOS 11.4.1 kunye ne-tvOS 11.4.1 ngoku ziyafumaneka kubaphuhlisi
Nangona uninzi lwabaphuhlisi begxile kwi-iOS 12 kwaye uhlaziyo lwabo luhambelana ngokupheleleyo ne ...
Namhlanje i-HomePod iyathengiswa eFrance, eJamani naseCanada
Ngamazwe amathathu okuqala ukuba nesithethi esitsha sika-Apple, iKhaya lasekhaya, elithengiswayo. Ngaphandle kwamathandabuzo oku ...
Inkonzo ye-Apple Maps yehle iiyure ezimbalwa
Bonke abasebenzisi bayachaphazeleka ngokuwa kweeMaphu zika-Apple iiyure ezimbalwa kule mvakwemini. Yinyani…
Ikhonkco le-Steam libuyela kwifom ye-beta ye-iOS kunye ne-tvOS
Ngoku ikhonkco le-Steam libuyele kwiVenkile ye-App kuzo zombini i-iOS kunye ne-tvOS kwakhona, kwifom ye-beta.
Umhleli we-Adobe we-quintessential wamaqonga eselfowuni, iAdobe Photoshop Express, sele ihlaziywa nje ngokudibanisa amanqaku amatsha.
Siyaqhubeka nokuvavanya i-iOS 12 kwaye ndigqiba kwelokuba sijamelene ne-beta efanelekileyo ebonelelwe yi-Apple kule minyaka mihlanu idlulileyo.
Bathi i-iPhone iyakunyusa isinxibelelanisi se-USB C kungekudala
Bambalwa, ukuba phantse akukho namnye owaziyo amanyathelo aqhele ukwenziwa yinkampani yaseCupertino, ekholelwa ukuba ...
Ivenkile yeeVenkile zeVenkile sisixhobo esitsha sika-Apple sabaphuhlisi
UApple usungule usetyenziso lweVenkile yeVenkile, isicelo esitsha esithatha indawo yeTunes Connect kwaye isinike ukufikelela kuyo yonke idatha yeapps zethu ezifumaneka kwiVenkile ye App.
Abaphuhlisi ngoku banokunika ii-betas zabo ngekhonkco yoluntu
U-Apple wazise inqaku elitsha kwi-TestFlight ukwenza kube lula kubaphuhlisi ukuba babelane ngezicelo zabo phakathi kwabavavanyi be-beta
IOS 12 ikuvumela ukuba usebenzise isikhethi esichanekileyo sekhibhodi kwizixhobo ngaphandle kwe-3D Touch
Ngoku kunokwenzeka ukubonga kwi-iOS 12 yokusebenzisa isitshixo sekhibhodi ngqo nakwiinkqubo ezingenayo itekhnoloji ye-3D Touch.
IOS 12 ikuvumela ukuba wabelane ngeephasiwedi zakho kunye neewebhusayithi ngeMacOS Mojave nge-AirDrop
Sifumene le nto intsha, kwaye i-iOS 12 ikuvumela ukuba wabelane ngamagama akho okugqithisa kunye neewebhusayithi ngeMacOS Mojave nge-AirDrop.
IOS 12 ikunika lonke ulwazi malunga nokusetyenziswa kwebhetri
IOS 12 isinika ukwaneliseka okutsha kunye nolwazi oluya kusinceda sazi ukuba zeziphi izicelo ezizezona zichitha ibhetri yethu
Le yindlela esebenza ngayo iWalkie-Talkie yewotsOS 5
Enye yezinto ezinqabileyo ezimbalwa esibonelelwa yi-watchOS 5 kwaye engahambelani nezemidlalo ngumsebenzi weWalkie-Talkie
Iimpawu ezintsha ze-12 ze-Apple ezingakhange zikhankanywe kwiWWDC18
Sikuzisa zonke iindaba ze-iOS 12 i-Apple engakuxelelanga yona, engembalwa kwaye ikwasebenza ngokufanelekileyo, njenge-multitasking entsha kunye nekhibhodi yokuqikelela.
I-Apple ihlaziya ngokuqinisekileyo iVenkile ye App yeMac ukutsala abaphuhlisi kwakhona
Lifikile ixesha lokunika iVenkile yeApple iMac ukuphakanyiswa kobuso, yile nto abafana baseApple banikele ngayo ngeli xesha leWWDC18.
IMacOS Mojave ijolise kubucala, iphucula isixhobo se-skrini kwaye izisa usetyenziso olutsha
Kule WWDC18 U-Apple uthathe isigqibo sokongeza inani elilungileyo leendaba ngohlobo lwezicelo kunye nokuphuculwa kokusebenza kwe-macOS ezinje ngeNdaba, iKhaya kunye nokunye okuninzi.
I-FaceTime iya kuvumela iifowuni zeqela kwaye zidibanise neMiyalezo ene-iOS 12
IOS 12 iya kuvumela iqela levidiyo ukuba lifowune kwaye liya kudityaniswa ngokupheleleyo neAnimojis, iMemojis kunye neMiyalezo.
Izaziso eziqokelelweyo ziza kwi-iOS 12, ekugqibeleni i-Apple iyakuqonda ukubaluleka kwayo
U-Apple ekugqibeleni uyakuqonda ukubaluleka kokubeka ngokwamaqela izaziso kwiZiko leSaziso kwaye wayiveza njengenoveli eza kuziswa yi-iOS 12.
Khuphela iiWWDC wallpapers ze-iPhone yakho
Sikwiiyure nje ezimbalwa ukusuka kwigama eliphambili leApple eliqala eSan Jose, iZiko leNgqungquthela laseMcEnery, kwaye asinakulinda ...
I-HomeScan ikunceda ujonge uluhlu lwezixhobo zakho zeKhayaKit
I-HomeScan sisicelo esisisiseko sokwazi ukuba izixhobo zakho zeKhayaKit zifika kunye nomqondiso oyimfuneko kwicandelo lolawulo ukuze yonke into isebenze ngokuchanekileyo.
I-Apple iyakuhlaziya i-ARKit yayo ukuze ii-iPhones ezimbini zinxibelelane kwinyani efanayo eqinisekisiweyo
I-ARKit inokuba yenye yeekhithi zophuhliso eziza kuhlaziywa kwi-WWDC 2018. I-Apple kulindeleke ukuba ivumele abaphuhlisi ukuba benze indawo ekwabelwana ngayo phakathi kweeterminal ezimbini.
Landela umboniso we-iOS 12 bukhoma ngeActualidad iPhone
U-Apple usinika lo Mvulo i-iOS 12 entsha kunye nolunye uhlaziyo lwazo zonke izixhobo zalo eWWDC 2018 kwaye siza kukuxelela yonke into bukhoma. Landela apha.
Ialbhamu entsha kaKhan West efumaneka kwiApple Music okoko yakhululwa
Ialbhamu entsha kaKhan West iza kwiApple Music nakwamanye amaqonga, ishiya bucala i-albhamu yakhe yokugqibela noTidal.
Isikhuseli ekucingelwa ukuba yi-iPhone SE 2 yesikrini esine-notch kunye nesincinci sihluziwe
Sele sithetha ngaphezulu konyaka malunga nokuqaliswa kwesizukulwana esilandelayo se-iPhone SE, isixhobo esifike ...
Akusayi kubakho zintsha ii-MacBooks okanye ii-iPads kwiWWDC 2018
U-Apple akazukuveza zixhobo zintsha kwi-WWDC 2018, kufuneka alinde de kube sehlotyeni ukuze abone iiMacBooks ezintsha kunye neePads.
Uhlalutyo lweRingi yeVidiyo yentsimbi 2, ividiyo ye-intercom ukugcina iso ukuba ngubani oza ekhaya
Sihlalutye iRing Video Doorbell 2, iklip yevidiyo kunye nekhamera yokujonga enokukuvumela ukuba ubone ukuba ngubani onkqonkqoza emnyango wangaphambili kwaye uchonge abangeneleli
Ezi ziindaba zokuhlaziya i-11.4 yePodPod yasekhaya
I-HomePod ifumana uhlaziyo lwayo lwesibini nolona lubalulekileyo ukuza kuthi ga ngoku, ngokubandakanya i-AirPlay 2, ukusetyenziswa kwesitiriyo esinezithethi ezibini okanye ukufikelela kwikhalenda.
ICanada, iFrance neJamani ziya kuphehlelela iKhayaPod nge-18 kaJuni
Kubonakala ngathi izinto zihamba kancinci ngakumbi malunga nentengiso yePodPod yasekhaya. I-Apple iceba ukuqala ...
I-lens elandelayo kathathu ye-iPhone iya kuba nemisebenzi ye-3D kunye ne-Zoom engcono
I-iPhone ye-2019 inokubandakanya inkqubo yeelensi ezintathu eya kuthi inike ikhamera ukusebenza kwe-3D ukongeza ekuphuculeni ukubanjwa kwe-zoom ukuya kuthi ga kwi-3x.
ICarPlay ngoku iyafumaneka kwiimodeli ezingaphezu kwama-400 eUnited States
Abavelisi bezithuthi ababonelela ngeCarPlay benza iimodeli ezingaphezu kwama-400 ngobu bugcisa bufumaneke kubathengi baseMelika.
IXiaomi Mi Mix 2s VS iPhone X, ngaba kungakho isiphelo esinexabiso eliphantsi?
Siza kujongana neXiaomi Mi Mix 2S kunye ne-iPhone X ebusweni esiya kuba nempikiswano. Ke siza kutyhila inyani malunga nokwenza kunye nokuthengisa iifowuni eziphezulu nge-499 euro kuphela
Iprojekthi "Inkwenkwezi": ikhompyuter enescreen sokuchukumisa kunye neprosesa ye-ARM
Iprojekthi eyimfihlo ye-Apple, ebizwa ngokuba yiNkanyezi, ityhilwe, enokuba yikhompyuter ye-hybrid ebesithetha ngayo iinyanga
UMophie usungula ipakethi yokuhamba ukuze ahlawule i-iPhone ngaphandle kwentambo
Ifemi Mophie ibonise ipaki yokuhamba esinokuba nayo kwimeko enye, yonke into esiyifunayo ukuze sikwazi ukubiza i-iPhone X, i-iPhone 8 kunye ne-iPhone 8 Plus xa siseluhambeni.
Siyaphinda. Ngoku ziiCanalys ezithi ukuthengiswa kweApple Watch kuyimpumelelo
Konke oku ngaphandle kokwazi ngokwenene amanani asemthethweni anikezelwe yinkampani yeCupertino. Kwaye kuba ndisazi ...
Le ngcamango ye-iOS 12 isinika iZiko loLwazi esilifunayo sonke
Umxholo omtsha usinika iZiko leSaziso le-iOS 12 ukuba ngaphezulu komnye wethu angatyikitya amehlo ethu evaliwe kwi-iPhone yethu
UApple uqinisekisa ukuba uyakusasaza inkomfa yokuqala yeWWDC ngoJuni 4
Inkampani esekwe eCupertino iqinisekisile ngokusesikweni ukuba iWWDC 2018 izakufumaneka kuwo wonke umntu, nokuba asinayo iakhawunti yonjiniyela.
Kwi-10 ephezulu ye-Fortune 500, i-Apple ilahlekelwe sisikhundla esinye ukuya kwesine
Inkampani yeCupertino isandul 'ukwehla ukusuka kwindawo yesithathu ukuya kweyesine kwinqanaba le-Fortune yonyaka….
Ishumi elinambini iSouth Airly, sisisombululo esifanelekileyo sokusebenzisa ii-headphone zakho zeBluetooth naphina
Amazwe alishumi elinambini eMzantsi asinika iadaptha yayo entsha yeAirFlym, isisombululo esincinci ukuze sikwazi ukusebenzisa ii-headphone zethu ezingenazingcingo naphina apho sikhona, sisidibanisa nesiphumo seJack saso nasiphi na isixhobo.
I-Apple iqinisekisa umsitho we-WWDC 2018 ngoJuni 4 nge-19: 00 pm
U-Apple usandula ukuthumela izimemo koonondaba eqinisekisa umsitho wokuqala we-WWDC 2018 ngoJuni 4 ozayo nge-10: 00 ngexesha lendawo, nge-19: 00 ixesha laseSpain.
USudio Niva, "iNyaniso engenazingcingo" akufuneki ibize
I-Sudio isinika ii-headphone ezintsha ezingenazingcingo ezidibanisa umgangatho wesandi kunye nexabiso elinokhuphiswano kakhulu kunye nokuzimela okwamkelekileyo.
I-iPhone X Tesla, i-iPhone X enecala elikhethekileyo elibiza phantse i-5.000 yeedola
Xa kuziwa ekuziphatheni ngokobuqu isixhobo sethu, kunye nokukhusela, kwintengiso esinokuyifumana ...
IAmazon ibonelela namhlanje ngoMeyi 21
Sikhetha ezona zixhobo zibalaseleyo zeAmazon kwizixhobo ze-iPhone kunye ne-iPad, ngezaphulelo ezisusela kwi-30 ukuya kwi-40% kodwa ziya kuhlala kuphela kude kube sekupheleni kosuku.
I-Spigen Classic One, i-iPhone X yakho kunye noyilo lokuqala
Sihlalutya imeko ye-Spigen Classic One, ityala lesikhumbuzo eliguqula i-iPhone X yakho ibe yi-iPhone yoqobo ngelixa uyikhusela
Yonwabela iinkwenkwezi ngeStar Rover, simahla okwexeshana
Ukuba uhlala ufuna ukonwabela iinkwenkwezi, jonga iinkwenkwezi kunye nokunye, enkosi kwi-Star Rover kunokwenzeka kwaye ngendlela elula kakhulu.
Intengiso entsha ye-Samsung ezama ukuhlekisa nge-Apple
Isamsung yazisa isibhengezo esitsha seGPS S9 apho kufuneka ibhenele kwi-iPhone 6 phantse yeminyaka emine ukuze ikwazi ukuphakamisa ubuhle beGPS S9 yayo.
I-Facebook isusa malunga ne-583 yezigidi ze-akhawunti ezingezizo ukuza kuthi ga ngo-2018
Ukucocwa kuyaqhubeka kuFacebook. Inethiwekhi yoluntu kaMark Zuckerberg iyaqhubeka nokusebenza nzima ukuze ihlale icocekile kwaye ...
I-Apple ifumana imbasa yomzi mveliso we-iPhone X kunye ne-iPad Pro
U-Apple uphumelele amabhaso amabini kwi-iPhone X kunye ne-10,5-intshi ye-iPad Pro ebonisa ubuchwephesha.
I-Lenovo isibonisa i-iPhone X ngaphandle kwenotshi
Zininzi iifemu zeefowuni ze-Android esizibonileyo kulo nyaka weNkomfa yeHlabathi yeFowuni eyayinesibindi ...
I-YouTube ye-iOS yongeza inkxaso kwiividiyo ze-HDR kwi-iPhone X
Uphando olukhulu lukaGoogle lusanda kukhupha uhlaziyo olutsha kwisicelo seYouTube se-iOS uhlaziyo ...
IJUUK Viteza, ubutofotofo baseNtaliyane kwiApple Watch yakho
I-JUUK isinika iimodeli ezimbini ezintsha ze-Apple Watch straps ezenziwe ngesikhumba kwaye ziyafumaneka ngemibala eyahlukeneyo: UMonza kunye neViteza.
I-iPhone X Plus iya kuba bubungakanani be-iPhone 8 Plus.
I-iPhone X Plus entsha iza kufika inobungakanani obuphantse bulingane ne-iPhone 8 Plus yangoku kodwa ngescreen esifikelela kwii-intshi ze-6,5
UApple unokusebenzisa umboniso weMLCD kwii-iPhones zayo ezilandelayo
I-Apple inokusebenzisa izikrini ze-LG ngetekhnoloji entsha ye-MLCD efezekisa ukukhanya okuphezulu kunye nokusetyenziswa okuphantsi kwee-LCDs zayo ezintsha ze-2018 ze-XNUMX
Ukuba i-ID yakho yobuso ayiphumeleli, kunokwenzeka ukuba iApple iyitshintshe i-iPhone X yakho simahla
Kubonakala ngathi kukho ingxaki encinci ngothotho lwe-iPhone X engagqibelelanga engaphumeleliyo ...
IFransi, iJamani kunye neJapan iya kuba ngamazwe alandelayo okufumana iKhayaPod
Ngokwamaxwebhu amva nje avunyiweyo kwiwebhusayithi ka-Apple, yonke into ibonakala ngathi ibonisa ukuba i-HomePod kungekudala iza kufika eJapan, eFrance naseJamani.
Ibhodi yezitshixo yeGecko Folio, imeko yekhibhodi eguquguqukayo ye-iPad 2017 kunye ne-2018
UGecko usinika isiciko sekhibhodi esingangenwa ngamanzi nesisusayo esiza kukuvumela ukuba usebenzise i-iPad yakho iiyure ezininzi zomsebenzi wokuchwetheza ngaphandle kwengxaki.
Ayinguwe wedwa onengxaki yokudlala iPUBG ngee-headphone zeBluetooth
Baninzi abasebenzisi ababonisa ukungonwabi kwabo xa bedlala i-PUBG yedabi eneebhloko zeBluetooth
Ukusilela kuka-Apple kuya kufuneka kulinde
U-Apple uveze amanani ezoqoqosho abonisa kwakhona ukuba amarhe malunga nokuthengiswa kwawo kakubi akanasiseko ngokupheleleyo
Abasebenzi bakhetha i-iOS kunye neMac ngaphezulu kweWindows kunye ne-Android
Kuthekani ukuba ubunokunikwa ukhetho kwinkampani yakho? Iziphumo kukuba ngokutsho kophando lwamva nje, abasebenzi bakhetha ukwenza imisebenzi yabo besebenzisa iMac okanye i-iPhone
IOS 11 sele ifakiwe kwizixhobo ezintathu kwezine
Ukuza kuthi ga ngoku, kwaye ngokwedatha yakutshanje ye-Apple, i-iOS 11 inesabelo sokwamkelwa phakathi kwazo zonke izixhobo ezisebenzayo kwintengiso ye-77%
Inkampani yezokhuseleko yeGreyShift igqekeziwe. Ewe, inkampani eye yakwazi ukuqhekeza i-iPhone ...
Ekuqaleni kuka-Epreli iindaba zafika kwinethiwekhi yokuqalisa ebizwa ngokuba yiGreyShift, eyayiphumelele ...
I-Readdle ihlaziya i-PDF yeNgcali ngombonisi omtsha woxwebhu
I-Readdle ihlaziye i-app yayo yeNgcali ye-PDF ngokongeza imowudi entsha yokubonisa, kunye nokubandakanya umphathi wefayile omtsha wamafu ogcino ahlukeneyo.
Musa ukuphazamisa imo yokuqhuba ukunciphisa ukusetyenziswa kwe-iPhone ngelixa uqhuba
Musa ukuphazamisa ngelixa ukuqhuba kweempawu kunciphisa ukusetyenziswa kwe-iPhone ngabasebenzisi be-iPhone ngelixa uqhuba eUnited States.
Ukujongwa kwakhona kweAmplifi Teleport, iVPN yakho naphina
I-Amplifi Teleport ikunika amandla okwenza i-VPN yokuqhagamshela kwinethiwekhi yakho yasekhaya naphina ngokuyixhuma kwisokethi.
IFixit ibhengeziwe, iingxaki kwizikrini kwi-iOS 11.3 kuphela ziimpazamo zesoftware
Hayi, ingxaki abanye abasebenzisi abanayo kwizikrini zomntu wesithathu, ezinje nge-iFixit, ye-iPhone 8 yabo ayiveli kwizikrini, ivela kwi-iOS 11.3 uqobo.
Isibonelelo: Ifayibha kwi-50 Mbps kunye nokudityaniswa kwi-14,90 euro ngenyanga nge-Movistar
UMovistar usungule ukwazisa okutsha okusivumela ukuba sonwabele i-Intanethi ye-50 Mb kunye neefowuni ezingenamda kumnxeba wasemhlabeni kunye nemizuzu engama-50 kwii-mobiles nge-14,90 ye-euro kuphela ngenyanga kunyaka wokuqala.
Xtorm Vigor Power Hub, ubize i-iPhone yakho, i-iPad kunye neMacBook ngetshaja enye
IXtorm Vigor Power Hub sisiseko sokutshaja esivumela ukuba siphinde sihlaziye ukufikelela kwizixhobo ezisi-7, kubandakanya neelaptop yethu.
Ukusilela okusolwayo kwePodPod yasekhaya, okanye indlela yokufumana iindaba ngaphandle kwendawo
UMark Gurman uqinisekisile ukuba ukuthengiswa kwePodPod kuyadanisa, kodwa siyayaphula idatha ukubonisa ukuba izigqibo zakhe azinasiseko sinzulu.
Le inokuba yi-iPhone X kwi-rose yegolide
Sikubonisa umbono wokuba i-iPhone X elandelayo inokuba njani ngombala ovuke ngegolide, enkosi ekunikezeleni umyili uMartin Hajek.
Uyifumana njani iminxeba evela kwi-iPhone kwi-iPad okanye kwi-Mac
I-Apple ibisoloko isaziwa ngokunikezela ngeemenyu ezilula kakhulu, ngaphandle kwento yokuba, okwexeshana ...
Isibane sasekhaya esihambelana nokuKhanya siyabulela kuKoogeek
Sivavanya iimveliso zokukhanyisa zeKoogeek ezihambelana neKhayaKit: ibhalbhu, isokethi kunye notshintsho. Indlela efikelelekayo kwaye elula yokuqalisa kwi-automation yasekhaya.
I-Instagram yongeza imo yomzobo kwisicelo sayo, ngaphandle kwesidingo sekhamera ephindwe kabini
I-intanethi ye-intanethi ye-intanethi, enye ebizwa ngokuba yi-Instagram, ivele ihlaziye isicelo sayo ngokusungula i-Portrait Mode evumela ukuba sithathe imifanekiso yabantu abanemvelaphi ngaphandle kokugxila.
I-Apple ijongene nezohlwayo eMzantsi Korea ngenxa yokujongana nabathwali
Ikhomishini yokulwa ukungaqiniseki yaseMzantsi Korea sele iqalile ukuphanda umgaqo we-Apple kunye nabaphetheyo kwaye bajongane nesohlwayo, njengoko kunjalo nakwamanye amazwe.
Uqhanqalazo eFrance malunga nendlela iApple eyibaleka ngayo irhafu eYurophu
Umbutho we-Attac ubonakalisile kwiivenkile ezahlukeneyo zeApple eFrance, yiyo loo nto ebonisa ukwala kwayo indlela esebenza ngayo iApple kubunjineli berhafu kwaye kuthintela ukuhlawula irhafu kwilizwe laseFrance.
I-iPhone 8 kunye ne-8 Plus (RED) inokumiliselwa ngomso, ngoMvulo
I-Apple inokumilisela i-iPhone 8 kunye ne-8 Plus ngombala obomvu ngoMvulo. I-iPhone RED entsha inokufika ngalo Mvulo, mhlawumbi ecaleni kwesiseko soMoya.
I-Xtorm Angle, isiseko sokuhlawulisa kwaye ubone ukuba kwenzeka ntoni kwiselfowuni yakho
I-Xtorm Angle yindawo yokutshaja engenazingcingo apho unokubeka khona i-iPhone yakho ngokuthe tye kwaye ngokuthe nkqo ukuze ubone isikrini ngelixa ubiza.
I-Russia imangalela iTelegram kwaye inokugqibela ukuyivimba
I-Russia ayinikezeli kwaye iTelegram ayiyiniki ... Isiphumo, isimangalo esenziwe ngumzimba welizwe olawulo lwezonxibelelwano ...
Uhlaziyo luka-Apple kuhlobo lwe-iTunes ngeVenkile ye-Apple kwishishini
Amakhwenkwe asekwe eCupertino ahlaziyile inguqulelo ye-iTunes ekhoyo kumaphepha enkxaso ka-Apple kwaye asinika ukufikelela kwiVenkile ye App.
I-2 ngaphandle kwe-10 ngamanqaku iFixit ayinika i-iPad 2018
Ngomnye unyaka, amanqaku okulungiswa afunyenwe yi-Apple's iPad asephantsi kakhulu: 2 kwali-10
I-AirPort Express inokuhambelana ne-Airplay 2 ngokwe-beta ye-iOS 11.4
I-AirPort Express, imveliso ye-Wi-Fi ekhutshwe ngo-2012, inokuthi ihambelane ne-AirPlay 2 njengeenkcukacha ngaphakathi komboniso we-beta ye-iOS 11.4.
U-Apple uqeshe intloko kaGoogle yobukrelekrele bokuzenzela
U-Apple uqeshe intloko kaGoogle yobukrelekrele bokukhokela ukwahlula eli candelo eApple
Ividiyo ye-720p kunye neefoto ezingama-360 ° zifika kuFacebook Messenger
I-Facebook ihlaziye isicelo sayo semiyalezo esinika ividiyo kumgangatho we-HD kunye nokwabelana ngemifanekiso eyi-360 °. Ezi mpawu zazisele zikhona kwiqonga jikelele.
Ukuhlelwa kwevidiyo ye-4K phakathi kwePad Pro 9,7 kunye ne-iPad 2018
Ukuba ucwangcisa ukuvuselela i-9,7-intshi ye-IP Pro ye-iPad entsha ye-2018, kungcono ukuba ujonge lo mzekeliso kuqala, kuba awuyi kuqaphela utshintsho olukhulu kumandla.
Iapile kunye neTSMC zibambisene ekwenzeni imiboniso yeMicrosoft
Emva kwamarhe amaninzi kunye nokuthetha kakhulu malunga nokwenziwa kunye nophuhliso lweeMicrosoft zeMicrosoft ezibonakalayo ...
Inkqubo yeSpotify yeApple Watch inokwenzeka ngokukhawuleza
I-Spotify inokuthi ihambise usetyenziso lwayo lwe-Apple Watch kule WWDC yalo nyaka, emva kweminyaka emithathu ngaphandle kwenkqubo ehambelana neWOSOS.
I-Gecko Bouce Cover ithembisa ukuya kuthi ga kwiimitha ezintathu zokhuselo
I-GHEcko isinika ityala elithembisa ukukhuselwa kumachaphaza ukuya kuthi ga kwiimitha ezi-3 ze-iPhone X, i-iPhone 7 Plus kunye ne-8 Plus
Ngaba ukutshaja ngaphandle kwamacingo kubi kwibhetri yakho?
Ngaba kuyinyani ukuba ukutshaja ngaphandle kwamacingo kungonakalisa ibhetri yakho? Sihlalutya izimvo zeengcali kwaye sishwankathela indlela onokunyamekela ngayo ibhetri ye-iPhone yakho
Umnyhadala wale mvakwemini ayenzelwanga abantwana, nangona iinjongo zawo zizikolo
Umnyhadala wale mvakwemini ungabonisa ubuchule besoftware obujolise kwicandelo lezemfundo ukuze ubuyise umhlaba ophulukene ne-iPad
Ukuba sesichengeni kwamva nje kwi-iOS kuchaphazela ukufundwa kweekhowudi zeQR kwikhamera
Isiphene sokugqibela esifunyenwe kwi-iOS 11, siyifumana kwisicelo sekhamera xa sisebenzisa i-QR code reader, esihambisa kwiwebhusayithi eyahlukileyo kunaleyo ibibonisiwe ngaphambili.
Uyawubona umsitho ngoLwesibini olandelayo, nge-27 ka-Matshi ... ulibazisekile
Umnyhadala weApple awuzukusasazwa ngqo kodwa siya kuba nakho ukubona zonke iindaba xa sele sigqityiwe kwisicelo seApple TV